နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: July 10, 2017 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr.Borge Brende အား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် တောင့်တင်း ခိုင်မာစေရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် မြန်မာ- နော်ဝေနှစ်နိုင်ငံ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံတို့သည် ဆက်ဆံရေး အလွန်ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးကို လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနှင့်နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံမိတ်ဖက်အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားသကဲ့သို့ နှစ်နိုင်ငံပိုမိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးကို လုပ်ဆောင်နေပါ ကြောင်း၊ နော်ဝေနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ထွန်းကားရေးအတွက် အစဉ်တစိုက် အားပေးကူညီခဲ့သည့် နိုင်ငံဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်၍ နော်ဝေနိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံများကို ရယူရမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံနှင့် ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက် တည်ဆောက်သွားရန် သံန္နိဌာန် ချထားပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေးတွင် များစွာ အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေ ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရခြင်းသည် မြန်မာနှင့် နော်ဝေနှစ်နိုင်ငံအကြား ငါးလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်း အခြေအနေများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်း မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Borge Brende တို့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်း မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးသဈပငျစိုကျပှဲတျော